Intlama Itreyi, Ukubumba Pulp Itreyi, Packaging Itreyi - Dingtian
Ukupakishwa kweMveliso ye-Elektroniki
mobile itreyi yintlama itreyi
Itreyi yediski eneselfowuni
idaleyi itreyi for condenser usiba
Izixhobo zekhompyuter itreyi yephepha
ezinye iimveliso ze-elektroniki zetreyi yetreyini
Ukupakishwa kweMveliso yabathengi
Itreyi yebhotile yotywala
Pulp Ukupakisha ezinye iimfuno zemihla ngemihla
Iibhokisi zezipho zokuthambisa okanye itreyi yomgubo
itreyi yomgubo yesithunzi samehlo
Inkampani Tiantai Dingtian Packaging Co., Ltd.
Tiantai Dingtian Ukupakisha Co., Ltd. ngumzi mveliso wobuchwephesha obonelela ngesiphelo esiphakamileyo semithombo yokubumba yempahla yokupakisha kunye nezisombululo, ukudibanisa nenkonzo yoyilo elungileyo, inkonzo ye-CNC yokuvelisa, ukuvelisa ngobuninzi kunye nenkonzo yokuhamba.
Yasekwa ngo-2014, inkampani ibekwe Tiantai okwilizwe, kwiphondo Zhejiang, indawo yesizwe 5A ebukekayo kunye intle. Ngoku umzi-mveliso wethu ungaphezulu kwe-6500 yeemitha zesikwere kwaye unabasebenzi abangaphezulu kwe-100. Kule minyaka mi-6 idlulileyo, besisoloko sihlangabezana neemfuno zabathengi ngeemveliso ezingcono kunye nenkxaso yetekhnoloji kunye nenkonzo yasemva kwentengiso. Ngoku siye kwindawo enkulu-isikali, mihla kunye nobungcali-ekupheleni isiphelo amashishini imveliso ifayibha kunye negama elihle.
Itreyi yefowuni yePulp
Ipeni yetreyi yomthamo
Itreyi yamazinyo ye-elektroniki
Izixhobo zekhompyuter i-Pulp Tray
I-MF Ibhokisi yezithambiso
Uphuhliso Trend of Intlama Ukubumbela Products In Inkampani yethu
Inkampani yethu iyakhula kwimveliso yokubumba ye-pulp iminyaka emi-6, apho inkqubela phambili enkulu yenziwe. Ngokukodwa, iimveliso zokupakisha ezinokusingqongileyo kunye nokulahlwa kwetafile okusingqongileyo kuye kwasetyenziswa ngokubanzi, kodwa kusekho imida emininzi ...
Inkqubo Production Inkampani yethu
Imveliso ye-Pulp exonxiweyo ngokubanzi ibandakanya ukulungiswa kwempuphu, ukubumba, ukomisa, ukucofa okutshisayo kunye nezinye iinkqubo. 1. Ukulungiswa kwempuphu Ukutsala kubandakanya amanyathelo amathathu okombiwa kwezinto ezingafunekiyo, ukutshiza kunye nokutshiza. Kuqala, ifayibha ephambili yatsalwa kumgubo emva kokuhlolwa kunye ne-classifi ...
Iimpawu zokuPakisha kwePulp
Ukupakisha kusebenza kuyo yonke inkqubo yokubonelela ngezinto ezivela kwimathiriyeli, ukuthengwa, ukuveliswa, ukuthengiswa kunye nokusetyenziswa, kwaye kunxulumene nobomi bomntu. Ngophumezo oluqhubekayo lwemigaqo-nkqubo yokhuselo lokusingqongileyo kunye nokuphuculwa kweenjongo zokhuselo lokusingqongileyo kwabathengi, ukuvota ...
Itreyi yePhepha leDayi, Ibhokisi yokuPakisha yokutya, Ibhokisi yokuPakisha yokutya okukhawulezayo, Ukutya kwiBakala lokuPakisha iibhokisi, Zonke Iindidi Zokudaya Ukurhangqwa kwePulp Holder, Ukudaya ukuSonga iPulp Holder,